कोरोना बिमामा विवादास्पद नीति : १ लाखको बिमा गर्दा २५ हजार मात्रै भुक्तानी ! – Himalitimes
कोरोना बिमामा विवादास्पद नीति : १ लाखको बिमा गर्दा २५ हजार मात्रै भुक्तानी !
२०७७ भाद्र ३० ०६:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौ । अब १ लाखको कोरोना बिमा गर्नेले बिमांकबराबर होइन, जम्मा २५ हजार रुपैयाँ लिएर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले आइतबार कोरोना बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने नियम बनाएको हो ।
त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम् ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, कुनै बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा २० हजार खर्च भयो त्यति मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नेछ । ५० हजारको बिमा गर्नेले अधिकतम साढे ३७ हजार र १ लाखको बिमा गर्नेले ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । जबकि, यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै जतिको बिमा गरेको हो, त्यति नै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने व्यवस्था थियो ।
कोरोना बिमाको राहत तथा अस्पताल भर्ना खर्च लिन संक्रमित आफैं बिमा कम्पनीहरूमा जानुपर्ने भएको छ । समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गर्दै संक्रमितलाई मात्रै दाबी भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरेको हो । संक्रमितको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्रै इच्छाएको वा कानुनी मान्यता पाएको नातेदारले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । यसअघिको व्यवस्थामा संक्रमितको परिवारले कम्पनीमा दाबी भुक्तानी पाउँथ्यो ।
यसअघि बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहारको आर्थिक सहयोग हुने भन्दै संक्रमणलगत्तै रकम दिने गरी कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेका थिए । तर, अब भने बिमित संक्रमणमुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
बिमा समितिले यसअघिदेखि नै कोरोना संक्रमितले दाबी भुक्तानी नदिन कम्पनीहरूलाई उक्साउने गरी नीतिहरू परिमार्जन गर्दै आएको छ । यसपटक समेत गरी समितिले पाँच महिनामा तीनपटक पोलिसी संशोधन गरिसकेको छ । तर, बिमा समितिका विज्ञ भोजराज शर्मा भने परिवेशअनुसार पोलिसी परिवर्तन हुँदै जानु स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
बिमा समितिले पहिला बिमांक रकम दिने भनेर बिमा पोलिसी सञ्चालन ग¥यो, अहिले राहत र उपचार खर्च दिन्छु भन्नु ठगी होइन र ? भन्ने प्रश्नमा विज्ञ शर्माले भने, ‘हिजोका दिनमा बिक्री भएका पोलिसीमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, नयाँ पोलिसीका बारेमा मलाई थाहा छैन ।’
अर्कातिर, अब एकजना मात्रैले कोरोना बिमा नै गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ । अबदेखि जारी हुने पोलिसी परिवार र संस्थागत मात्रै हुने र अवधि आगामी असारसम्मको मात्रै हुनेछ । – नयाँ पत्रिका दैनिक
मल आयात अलपत्र पर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न अदालतको आदेश
नेपालका ७ जिल्लामा कोरोना संक्रमित शुन्य